Archive du 20170223
Hita ny misy an'i Lylison Ho avy ny fisamborana ...
Taorian�ny fametrahana taratasy mangataka ny hevitry ny Fitsarana avo momba ny lal�mpanorenana (HCC) nataon�ny filohan�ny antenimierandoholona mikasika ny raharaha loholona Lylison Ren� de Rolland ny 27 janoary, dia namoaka ny heviny ity andrim-panjakana ity omaly.
Tonga masiaka i Dadavalo sy Rajoelina Mihorohoro ny HVM
Fifidianana malalaka tsy misy sakantsakana no andrandrain�ny rehetra amin�ny taona 2018.
Sahia ry Gasy Ndao � Mbola mamim-bahoaka ny filoham-pirenena �
Nifampiarahaba noho ny fahatrarana ny taona tetsy amin�ny live hotel 67 hektara omaly ry zareo mpikambana ao anatin�ny Sahia ry Gasy Ndao (SGN) na ilay vovonana ho an�ny fiarovana ny repoblika fahefatra sy ny fiandrianam-pirenena izay tarihin�ny depioten�i Moramanga, Charles Randriamahefa.
Antoko TAMAMI �Omeo fahefana ny faritra ! �
Ny nanovana ny didim-pitondrana tamin�ny taona 1973 izay misy andininy 3 dia ny andininy 012, 013 ary 014, hoy ny filohan�ny antoko TAnora Malagasy MIroso (TAMAMI), Samihary Floriot, no fototry ny olana eto amintsika amin�izao fotoana izao.
Berija Ravelomanantsoa Izay misy vola ihany no akama !
Nivahiny tamina onjam-peo tsy miankina iray i Berija Ravelomanantsoa omaly.
Marc Ravalomanana Tsy matahotra fifidianana ny TIM
Mitaky fifidianana demokratika, mangarahara sy tsy manavaka ny fianakaviambe iraisampirenena ary miandrandra voka-pifidianana lavitry ny hala-bato sy safidim-bahoaka malalaka tsy misy fanodinkodinana ihany koa ny olom-pirenena,
Vava zatra mikombona !
Andrekaky o ! Fa loza inona indray ity ry Jean a ! Tsy vitanareo ny nanenjika na mba nanitsy ny dian�ilay vehivavy akamanareo tamin�ilay afera be tany atsimotsimo tany, ka na ry zareo miseho be saina eny Ambohibao sy etsy Anosy aza tsy nahovoka fa niala maina toy ny takotra e !
Webhelp Madagascar 3 000 m� ny toeram-piasany eny Andraharo
Fomba fiasa efa tena manana ny maha izy azy sy mandeha tsara eto Madagasikara ny � Outsourcing �.
Fampandrosoana an'Antananarivo Manana anjara toerana lehibe ireo fokontany
Nihaona tamin�ireo sefom-pokontany avy amin�ny boriborintany faha-2 sy faha-6 teny amin�ny Lapan�ny tan�na ny tompon�andraikitra vitsivitsy eo anivon�ny kaominina izay notarihin�ny ben�ny tan�na Lalao Ravalomanana.
Tsenan�Analakely Maharaka vaovao amin�ny radio ireo mpivarotra
Mandeha tsara ny radion�ny tsena hifampiseraserana amin�ireo mpivarotra napetraky ny CUA ao Analakely ka afaka manaraka ny vaovao rehetra misy eto amin�ny firenena sy manerana an�izao tontolo izao indray ankehitriny ireo mpivarotra ao.
Airtel sy Allianz Hiara-kiasa amin'ny resaka fiantohana
Ny volana novambra taona 2014 no nampahafantarina voalohany teto amintsika ny fiantohana � Antoka �, vokatry ny fiaraha-miasan�ny orinasam-pifandraisana Airtel sy ny Allianz Madagascar.
Salon De L�emploi Et De La Formation Hanomezana asa manodidina ny 1500 isa
Miezaka hatrany manampy ireo tanora tsy an�asa eto amintsika ny ivontoerana mpikarakara olona mitady asa MRH (Maganement Ressources Humaines).
Fanoherana ny herisetra Hamoaka rakitsary ny ISPPS
Sekoly ambony iray manofana ho mpitsabo mpanampy sy mpampivelona ny ISPPS ( Institut Sup�rieur des Param�dicaux et Promotion de la Sant�) etsy Andrefanambohijanahary.
Tsy misy fepetra !
Manohana tsy misy fepetra ! Niredona indray io teny io omaly nandritry ny famoriana mpanao gazety teny 67 ha.